Men driving car without number plates abduct MDC Alliance councillor’s wife & 6-month-old baby | My Zimbabwe News
Home News Men driving car without number plates abduct MDC Alliance councillor’s wife &...
Men driving car without number plates abduct MDC Alliance councillor’s wife & 6-month-old baby
They were allegedly beaten and then dumped in Dzivarasekwa high-density suburb. The statement read:
“The wife and 6 months old baby of MDC Alliance Councillor, Denford Ngadziore, as well as Allan Moyo and Snaga Lameck, were kidnapped from Ngadziore’s home in Mabelreign by suspected state agents driving a vehicle with no number plates. They were beaten and dumped in Dzivarasekwa.”
This comes after three MDC Alliance youth assembly officials, Joanna Mamombe, Netsai Marova and Cecilia Chimbiri were abducted in Harare last month and later sexually abused and dumped in Bindura, Mashonaland Central Province.
Previous articleTop Malawian State House official congratulates Dr Chakwera for winning Presidential election re-run
Next articleHorror as Zimbabwean man (31) stabs US teen girl to death for rejecting his love proposal